” ကျွန်တော် နှင့် တောနက်တွင်းက မိန်းမလှများ “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ” ကျွန်တော် နှင့် တောနက်တွင်းက မိန်းမလှများ “
” ကျွန်တော် နှင့် တောနက်တွင်းက မိန်းမလှများ “
Posted by YE YINT HLAING on Sep 1, 2013 in My Dear Diary | 20 comments
ဒီလမ်းက စစ်ပြေးလမ်းဗျ ! နောက် သုံးနာရီ လောက် ဆက်ပြီး သွားမယ် ဆိုရင် ကြိုး တတားပျက်တွေ တွေ.ရလိမ့်မယ် ။ စစ်တွင်း က အသုံးပြု ခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာ ! နောက်ပိုင်း ချင်း တောင် ပေါ် က လူ တွေ ဒီ လမ်းကို သုံးခဲ့ကြသေးတယ် ။ ခုတော့ ဂန့်ဂေါ–ဟားခါး လမ်းတွေ ပွင့်သွား ပြီဆိုတော့ ဒီလမ်းကို လုံးဝ မသုံးကြပြန် တော့ဘူး ။ နွား မှောင်ခို သမား တွေလောက်ပဲ သုံးကြတော့တယ် ။ လာဗျာ ကိုရဲရင့် ! ထူး ထဲ ဆင်းပြီး ရေချိုးကြရအောင် ။ ဪ အေး အေး —- ကောင်းတာပေါ့ကွာ —-
ဒါနဲ့ ကျွန်တော် လည်း လွင်မိုး ခေါ် ရာ ထူးဆို တဲ့နေရာ ကို ရောက်ခဲ့တယ် ။ ဪ — ထူး ဆိုလို့ ဘာများ မှတ်တယ် —- အလျှား ပေ ၃၀ ၊ အနံ ၁၅ ပေ အနက် ၅ ပေ လောက် ရှိတဲ့ သဘာဝ ကျောက်ရေအိုင် ကြီးပဲ ။ စိမ့်ရေ က အဝင် အထွက် ရှိသလို ကြမ်းပြင် နဲ့ အိုင်ထဲ မှာကူးနေတဲ့ ငါးလေးတွေ မြင်နေရလောက် အောင်ကို ရေ က ကြည်နေတယ် ။ ရေထဲ ဆင်းလိုက် တော့ ရေက စိမ့်အေး နေတာ မို့ တကိုယ်လုံး နေရာအနှံ့ ကြက်သီးလေးတွေ ထသွားတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ရေချိုးပြီးချိန် မှာတော့ တကိုယ် လုံး လန်းသွားတယ် ။အားအင်တွေလည်း ပြည့်လာ သလို တက်တက်ကြွကြွ လေးဖြစ်လာတာမို့ ကျွန်တော် တို့စခန်းချ နားခိုရာ ဦးညိုမောင် တဲရောက်တော့ —- “လွင်မိုး ! သောက်ရအောင် ပြင်ကွာ ။ ပြင်ပြီးရင် အားလုံးစုပြီး တပျော်တပါး သောက်ကြတာ ပေါ့ ”
ကျွန်တော် တို့ ဝိုင်းဖွဲ့ သောက်နေကြ တဲ့ စင်ရဲ့ မြောက်စူးစူး အရပ်မှာ တောမီး က အကြီးအကျယ် လောင်နေတယ် ။ သိပ် မဝေးတဲ့ နေရာ က ဂျီ ဟောက်သံ ကလည်း အတိုင်းသား ကြားနေရတယ် ။ အရက်မြည်း က လည်း တောကောင်သားတွေ ချည်းပဲ ။ အရက် စ သောက်စ မှာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားသေးတယ် ။ တောကောင်လေးတွေ အတွက် ပါ ။ ဒါပေမဲ့ — ငါလည်း ဘာတတ်နိုင်မှာလည်း ဆိုတဲ့ အတွေး နဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ခံစားချက် ကို ရပ် – လွင်မိုး သီချင်း ဆိုကွာ ဆိုပြီး အဆို အက ဝါသနာ ပါသလို ဇတ်တွေထဲ လိုက် က ဘူးတဲ့ လွင်မိုး ကို ဆွ ပေးလိုက်တယ် ။ တဖြေးဖြေး နဲ့ အချိန်တွေ ကုန်လာ သလို လွင်မိုး လည်း ဆိုစရာ မြန်မာ သီချင်း မရှိတော့ဘူး ထင်တယ် ။ ကုလား သီချင်းတွေ ကိုရီးယား သီချင်းတွေ တရုတ်သီချင်းတွေ ဟုတ်တာကော မဟုတ်တာကော မူးမူးနဲ့ ရောကျိတ်လာတော့ အခြေအနေမှန်ကို ကို သိတဲ့ ကျွန်တော့ အတွက် အကြီးအကျယ် ဟာသ ဖြစ်နေပေမဲ့ ခပ်ရိုးရိုး နယ်ခံ ဘိုးတော် ကြီး က ခေါင်း တငြိမ့်ငြိမ့် နဲ့ သဘောကြနေလေရဲ့ ။ဒီလိုနဲ့ ည ၁၀ နာရီ ကျော်လောက် ရောက်မှ ဝိုင်း သိမ်းပြီး အိပ်ယာ ကိုယ်စီ ဝင်ခဲ့ ကြတယ် ။ ဦးညိုမောင် ရဲ့ တဲ က အတန်အသင့် ကျယ်ပေမဲ့ တဲပေါ် မှာ ဦးညိုမောင်နဲ့ ကျွန်တော်ပဲ အိပ်တယ် ။ ကျန် တဲ့သူတွေ က တဲအောက်နဲ့ တဲရဲ့ အရှေဘက်ပြင် မှာ အိပ်ကြတယ် ။
အဒီ ညက ည – ၂ – နာရီ ကျော်လောက် အချိန်မှာ တဲပေါ် ကို လူ တက်လာ သံ ကြားရ သလို တပြိုင်တည်း နိုးလာတယ်။ ပြီးတော့ ထထိုင်ပြီး တဲပေါ် တက်လာတဲ့သူတွေကို ကြည့်လိုက်တယ် ။ အမျိုးသမီး နှစ်ယောက် ဆိုတာလောက်ပဲ သိရပြီး ဘာမှ မသဲကွဲ တာမို့ နေရောင်ခြည် သုံး ဓာတ်မီး ကို ထွန်းပြီး ပလပ်စတစ် ကြိုးတန်းလန်း ချည်ပြီးသားမို့ တဲအမိုး မှာ ဇောက်ထိုး တွဲလောင်း လုပ်လိုက်တယ် ။ ကျွန်တော် အံ့ဩမှင်သက် သွားတယ် ။ ကျွန်တော့ အိပ်ယာ ခြေရင်းမှာ အမျိုးသမီးထိုင် ပုံစံ နဲ့ ကြုံ့ကြုံ့ လေးတွေ ထိုင်နေကြသူ တွေက အသက် နှစ်ဆယ် ဝန်းကျင် – အရွယ်တူ ၊ ရုပ်တူ ၊ ဝတ်စားပုံတူ ၊ ကိုယ်နေဟန် တူ ၊ ဆံပင် သိမ်းစည်းထုံးဖွဲ့ ပုံတူ တဲ့ ကျက်သရေရှိတဲ့ အလှမျက်နှာပိုင်ရှင် တွေဗျ ! ရင်ဖုံး နဲ့ ထမီ ရှည်ရှည်တွေ နဲ့မို့ ရှေးပုံ တောပုံပေါက် ကြပေမဲ့ ကျက်သရေ ရှိတဲ့ အလှမျက်နှာ ၊ ကိုယ်နေ ဟန်ထား ရှိတဲ့ နှစ်ယောက်ပါ ။
ကျွန်တော် နဲ့ သူတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေ ကြတာမို့ ကျွန်တော့ညာဘက် က တယောက် က စပြီး ကျွန်တော့ ကို စကားပြောလာတယ် ။” မောင်ငယ် ကတော့ အရက် ကြောင့် အကျိုးနည်း ရတော့မယ်တဲ့ ” အဲဒီ ကနေ စပြီး သူတို့ နှစ်ယောက်ပဲ ကျွန်တော့ အကြောင်း တွေကို တောက်လျှောက် ပြောတော့တာပဲ ။ ကျွန်တော် ကတော့ တခွန်းစ နှစ်ခွန်းစ သူတို့နှစ်ယောက်မေးတာ ဖြေရုံပဲ ။ အဲဒီ လို ပြောဆို နေကြရင်းကနေ ရယ်စရာ မောစရာ အကြောင်း လေးတွေကို ရောက်သွားပြီး ကျွန်တော်က ရယ်တယ် ။ သူတို့ နှစ်ယောက် ကတော့ အပြုံး ပွင့်ပွင့် လောက်ပဲ ရယ်တယ် ။ ပြောနေတဲ့ အကြောင်းအရာ အားလုံးက ကျွန်တော့ ကို ဗဟို ပြုထားတဲ့ ကျွန်တော့ အကြောင်းတွေ ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့ အတွက် သူတို့ ပြောနေတဲ့ ကျွန်တော့ အကြောင်း တွေဟာ တစ ထက် တစ ဟာသ ပိုမြောက်လာတယ် ။ ကျွန်တော် ပါးစပ် နဲ့ ရယ်လို့ အားမရတော့ လက်တွေပါ ပါလာပြီး တဟားဟားနဲ့ ကြမ်းပြင် ကို ပုတ်ပြီး ရယ်တယ် — ရယ်တယ် — အဲဒီ ရယ်တာကြီး ကို ကျွန်တော် မထိန်း နိုင်တော့ဘူး ။ မျက်ရည် တွေ စိမ့်လာတယ် ။ ဗိုက်ခေါက် တွေနာလာတယ် ။ ကြမ်းကို ပုပ်ပြီး ကျွန်တော် ရယ်နေတယ် ။
အဲဒီ လို ကြမ်း ကို ပုတ်ပြီး ရယ်နေရင်း ကနေ ကျွန်တော် အိပ်ယာ က နိုးလာတယ် ။ နေ့ခင်းဘက် ပင်ပန်းကြတာရယ် အရက်သောက်ပြီး အိပ်ယာ ဝင်ခဲ့ ကြတာရယ်ကြောင့် အားလုံး အိပ်နေလိုက်ကြတာ များ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ။ ကျွန်တော် ကြမ်းကို ပုတ်ပြီး ရယ်နေတာ ကို ဘယ်သူမှ မသိလိုက် ကြဘူး ။ နောက်ရက် အဲဒီ အိပ်မက် အကြောင်း ကို တော့ အားလုံး ကို ပြောပြ ဖြစ်တယ် ။ ဒီ လို နဲ့ ရက်အနည်းငယ် ကြာတော့ တည နေမှာ အသက် ၈ နှစ် ကျော်အရွယ် ရှိတဲ့ ထုံကြီး ဆိုတဲ့ အမဲလိုက် ခွေး နဲ့ ကျွန်တော် – တဲ ကို ပြန်လာကြမဲ့ သူတွေကို မျော်နေ ခဲ့ကြတယ် ။ ထုံကြီး ကတော့ ပြန်လာကြမဲ့ လမ်း ရှိရာ ကို တလှုပ်လှုပ် နဲ့ ကြည့်နေတယ် ။ နေလုံးကြီး တောင်ကို ကွယ်သွားပြီး ၁၅ မိနစ် လောက် အလွန် မှာတော့ တဲ ရဲ့ အနောက်မြောက် ထောင့်ကနေ လူသံကြား လာတယ် ။ ထုံကြီး လည်း ကျွန်တော် ကြားတဲ့ ဘက်ကို မျက်နှာမူပြီး အမြီး တလှုပ်လှုပ် နဲ့ ကြည့်တယ် ။ အမြဲ တမ်း တဲဝန်းကျင်ကို လူလာပြီ ဆိုရင် စိမ်းစိမ်း ကျက်ကျက် ရုပ်မမြင် အသံ မကြားရ ခင်ကတည်း ဟောင်နေ ကြ ဒီခွေး က ခု မ ဟောင်ပဲ အသံကြား ရာကို အမြီး တလှုပ်လှုပ် နှုတ်က တအီအီ နဲ့ ပဲ ကြည့်နေတယ် ။ လူသံ တွေ က နီးလာ လိုက် ဝေးသွား လိုက်မို့ လေသင့် လို့လို့ ကျွန်တော် တွေး နေတုန်း ရှိသေးတယ် ။ မိန်းမ သံ နဲ့ ရယ်တဲ့ အသံ တွေ ကြားရပါလေရော ။
ဆက်ရေးပါဦးမယ် ။ ဖတ်ရှူအားပေးကြသူများကို ကျေးဇူးပါ။
ဒီ ဇာတ်လမ်းကို ဖတ်ရင်း မျောသွားလိုက်တာ
စာသားအလျဉ်ထဲ . . . .
ဆရာမောင်သာရ ရဲ့ ရေးဟန်လေးနဲ့ တူလိုက်တာ လို့ 
ဆရာမောင်သာရ ရဲ့ ရေးဟန်လေးနဲ့ တူလိုက်တာ လို့ ”
အဲဒီ မှာ ကျွန်တော် သတိရ သွားတာက ဆရာမ နုနုရည် ( အင်းဝ ) ရဲ့ “နမ်းမှာလားရှင့် မွှေးတယ်မောင်” ကို ဝိုင်းပြီး ဒါကို ဒီလိုရေးရမလား ဆိုပြီး စာပေ အသိုင်းအဝိုင်းက ကန့်ကွက်တော့ ဆရာ မောင်သာရ က အယ်ဒီတာ စာတည်းမှာ စာမရေးပဲ သုံးလလောက် နေခဲ့တယ် ပြောတယ် ။ဒီတော့ ဆရာ နေမကောင်းလို့လား — ဘာကြောင့် စာမရေးတာလဲ ဆိုပြီး ဆရာ့ ပရိတ်သတ် နဲ့ ဆရာ့အသိုင်းအဝိုင်း မေးကြတယ် ။ အဲဒီမှာ ဆရာ က စာပေ မီးသတ်သမား ဆိုပြီး ဆရာမ နုနုရည် ( အင်းဝ ) ဘက်က ရပ်တည်ခဲ့ တယ်လို့ သိရတယ်ဗျ ! ကျွန်တော် လည်း လက်တွေ. ဘဝ တွေ ကို အတွင်း ကျကျ ရေးတဲ့ ဆရာမ နုနုရည် ( အင်းဝ ) ရဲ့ စာတွေကို ကြိုက်သလို လူကိုလည်း လေးစားတယ် ။ ခုလို ဖတ်ရှူအားပေးပြီး ပထမ အဦးဆုံး မန့် ပေးတဲ့ ကိုအလင်းဆက် ကို ကျေးဇူးပါဗျာ !
“နမ်းမှာလားမောင်ရဲ့ မွှေးတယ်ရှင် ” လို့ထင်နေတာဗျ…
ငါးအကြီးကြီး သုံးကောင် ပါလာတယ်။
အဲ — ဟုတ်တယ် သူကြီး ဟုတ်တယ်။ “နမ်းမှာလားမောင်ရဲ့ မွှေးတယ်ရှင် ” ။ နှစ်တွေ မနည်းကြာခဲ့ ပြီဆိုတော့ လွဲသွားတယ်။ ဆောတီး ဆောတီး ။
တောနက်တွင်းက မိန်းမလှများ ဆိုတော့
ဥစ္စာစောင့် တွေများ ဖြစ်နေမလား မသိဘူး ….
ဆက်မရေးဘဲနဲ့တော့ ပျောက်မသွားနဲ့နော့ …
အိမ်ထိ လိုက်လာမှာ ….
အိမ်ထိ လိုက်လာလည်း ရပါတယ်ဗျာ ! ဦးဇာ ကိုထမင်းလည်း ကျွေးမယ် ၊ နင်းလည်း ပေးမယ် ။ အဲ — ဦးဇာ ဆိုတာ မောင်မောင်ဇာ ကို ပြောတာဟုတ်ဘူးနော် ! ဆက်ရေးပါဦးမယ် ။ ကျေးဇူးပါ ။
မိန်းမလှလေးတွေ စမြင်ခါစမှာတင် ရပ်သွားတယ်တော့။
ခုတလောတော့ တောတွင်း ပို့(စ) လေးတွေ တာစားမဲ့သဘော ရှိတယ်။
စိတ်ဝင်စားနေတုန်း.. ဇာတ်လမ်းကို တိခနဲ ဖြတ်ချခဲ့တဲ့သူတွေကို တမီးတိတ်မုန်းတယ်မေမေ
ဆက်ရေးပါ့မယ်။ချောချောလေးတွေကို ကြောက်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်း။
မိန်းမလှလေးတွေ မိန်းမလှလေးတွေနဲ့ ဖတ်လာတာ ခုထိမတွေ့ရသေးလို့လေ။
တခါထဲအပြီးရေးလို့ရရဲ့သားနဲ့..အူးလေးက တယ်နောက်တာကိုး … feeling ဆန့်တငံ့ငံ့
တောတွင်းသူလေးတွေနဲ့ တွေ့ မှရပ်သွားတယ်
ကျိရတာ နာထင်ဒယ် နာထင်ဒယ် (ခွက်ဒစ်… ဦးရာလူ)
အဲဒီ ဖီလင်လောက် ဆိုးတာမရှိ
ဒီပို့စ်ကို မနေ့တည်းက ဖတ်မို့ ဖွင့်ရခက်နေတာနဲ့..
ခုညမှဖတ်မိတော့ .ကိုယ်လည်း သူရို့လို.အားမလို အားမရ..
ကိုယ့်အရင် ဖတ်ထားမိသူတွေလောက် ဆန့်တငင်ငင်ချိန် မများ..
နက်ဖြန်ခါတော့ ဆက်ဖတ်ရကောင်းမယ်ထင်ပါရဲ့ ကိုယ့်ဆြာ ရယ်..။
ဒါနဲ့ ကိုယ်တွေ့ဆို နေရာလေးတော့ သိချင်သား..။
ရွာထဲက လူပျိုကြီးဒွေ အတွက် ပါ.။
နေရာက ချင်းပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်း နယ်ခြားမှတ်တိုင်အနီး ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း နယ်ခြားမှတ်တိုင်နဲ့လည်းနီးတယ်။ ဂန့်ဂေါ မြို့နယ် ကန်ရွာ အနောက်ဘက်7mile ဝန်းကျင် လောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
စက်လှေ ခရီး လို ဘဲ တကဲ့ အဖြစ်အပျက်ဘဲလား မောင်ရဲ ရေ။
ပျောက်သွားတာ ပြန်ပေါ်လာလို့ ဝမ်းသာလှတယ်။
တကဲ့ အဖြစ်အပျက် ပါ အရီးခင် ။